Ogaden News Agency (ONA) – Kulan ay Yeesheen Ururka Haweenka Ogadenya Seattle Maalinimadii Sabtida
Kulan ay Yeesheen Ururka Haweenka Ogadenya Seattle Maalinimadii Sabtida
Maalintii Sabtida ee taariikhdu ahayd 21/02/2015 waxaa kulan balaadhan isugu yimid Urura Haweenka Ogadeniya ee magaalada Seatle ee State ka Washington. Kulankan ayaa waxaa khadka telefoonka kaga qayb galay Gudoomiyaha Ururka Haween Ogadeeniya abwaanad Rooda Ibrahim Abdi Gurey oo lagu naanayso Rooda af-janno ama Dheeman Janno.
Abwaanad Rooda oo qudbad xamaasad leh goobta ka soo jeedisay ayey haweenkii kulanka joogay ayay si gaar ugu adkaysay inay meel uga soo wada jeestaan gumeysiga arxanka daran ee shacabka xasuuqaya. Waxaa kale oo ay ku booriday inay ubadkooda taariikhda dalkooda baraan iyo afkooda hooyo halka ay ingiriiska ka barayaan, arintaasoo ay aad ula dheceen gaar ahaan hooyooyinkii fadhiyay shirka.
Rooda waxaa kale oo ay halkaas ka soo jeedisay gabay qiiro dadkii ku beeray. Dhinaca kale waxay kula dardaarantey midnimo iyo adkaysi iyo weliba isjacayl.
Fadumo kaalinriix oo iyana ka mid ah abaabulayaashii shirka ayaa iyana hadal guubaabo iyo dhiiri galin ah goobta ka soo jeedisay. Faadumo ayaa ka dalbatey haweenkii madasha fadhiyey inay halganka kaalintooda buuxin.
Dhinaca kale waxaa hadal gaaban isna meesha ka soo jeediyey gudoomiyaaha jahliyada Somalida Ogadeniya ee washington State Cali Yare. Cali ayaa mahad gaar ah u naqay hooyooyinkii shirka yimid.